You searched for एलन मस्क - Tech News Nepal Tech News Nepal
२०७८, ६ आश्विन बुधबार |
हाई स्पिड कनेक्सन हुँदा समेत किन स्लो हुन्छ
ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि असोज १२ देखि अनलाइन आवेदन
ऐतिहासिक अन्तरिक्ष उडानमा बाइडेनले बधाइ नदिँदा एलन मस्कको व्यङ्ग्य
काठमाडौं । एलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले गत शनिबार ऐतिहासिक अन्तरिक्ष उडान सम्पन्न गर्‍यो । पहिलोपल्ट पर्यटकसहितको निजी उडान सफल भएपछि मस्क र स्पेसएक्सलाई प्रशंसा मिलिरहको छ । तर अमेरिकी
‘सिभिलयन मिसन’ सफल भएपछि एलन मस्कलाई जेफ बेजोसको बधाइ
काठमाडौं । एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको पहिलो ‘सिभिलियन मिसन’ लाई लिएर अमेजनका मालिक जेफ बेजोसले बधाइ दिएका छन् । बेजोसले ट्वीट गर्दै मस्कलाई बधाइ दिएका हुन् । बुधबार उडेको उक्त
Published On : 18 September, 2021
मान्छे जस्तै रोबोट बनाउँदै एलन मस्क
काठमाडाैं । विद्युतीय कार निर्माता टेस्लाले मानवीय स्वरुपको रोबोट बनाउने भएको छ । खतरापूर्ण, दोहोरिरहने र बोरिङ कामका लागि यो रोबोट निर्माण गर्न लागिएको टेल्साका संस्थापक एलन मस्कले बताएका छन् ।
Published On : 21 August, 2021
एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सलाई नासाले दिएको ठेक्काविरुद्ध बेजोसले हाले मुद्दा
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सलाई दिएको ‘मुन कन्ट्रयाक्ट’ विरुद्ध अमेजनका मालिक तथा पूर्वसीईओ जेफ बेजोस अदालत पुगेका छन् । स्पेस एक्स एक्लैलाई उक्त परियोजना
Published On : 17 August, 2021
एलन मस्कले पाएको ठेक्का हात पार्न नासालाई बेजोसको २ अर्ब डलरको अफर
काठमाडौं । अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले ‘मुन कन्ट्रयाक्ट’ आफ्नो कम्पनी ब्लु ओरिजनलाई प्रदान गर्न नासालाई दुई अर्ब डलरकाे अफर गरेका छन् । यसअघि उक्त ठेक्का नासाले एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्ससँग
Published On : 29 July, 2021
संसारकै धनी एलन मस्क कस्तो घरमा बस्छन् ?
काठमाडौं । चाहे अन्तरिक्षको क्षेत्रमा होस् या सवारी साधनको क्षेत्र, सामाजिक सञ्जालमा होस् वा विटक्वाइनको क्षेत्रमा, एलन मस्कको नाम चर्चामा छ । केही समयअघि मात्र संसारकै धनी व्यक्तिको रुपमा सूचित
Published On :7July, 2021
१२ वर्षको उमेरमा कम्प्युटर गेम बनाएका एलन मस्क यसरी बने संसारकै धनी व्यक्ति
काठमाडौं । एउटा कम्प्युटर गेमबाट १२ वर्षको उमेरमै पाँच सय अमेरिकी डलर कमाएका एलन मस्क आज ५० वर्ष पुगेका छन् । याे अवधिमा उनी संसारकै धनी व्यक्ति बन्न सफल भएका
Published On : 28 June, 2021
‘एआई डे’ मार्फत टेस्लामा काम गर्ने अवसर दिँदै एलन मस्क
काठमाडौं । विद्युतीय कार निर्माता टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले आगामी दिनमा ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) डे’ आयोजना गर्ने जनाएका छन् । जसमा हालसम्म एआईमा आधारित भएर निर्माण भएका सफ्टेवयर लगायतका उपलब्धिको
Published On : 24 June, 2021
सेप्टेम्बरदेखि विश्वभर एलन मस्कको स्टारलिंक इन्टरनेट
काठमाडौं । एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्स इन्टरनेटको कभरेज आउँदो सेप्टेम्बरदेखि विश्वभर उपलब्ध हुने जनाइएको छ । कम्पनीकी अध्यक्ष ग्वायन शर्टवेलले मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएको रोयटर्सले जनाएको छ
टेस्लाका सीईओ एलन मस्कलाई ह्याकरको धम्की
काठमाडौं । टेस्लाका सीईओ एलन मस्क एक अज्ञात ह्याकर समूहकाे निशानामा परेका छन् । उक्त समूह कुन हाे भन्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नखुले पनि साे समूहले हालसम्म विश्वको डिजिटल
Published On :6June, 2021
बिटक्वाइनसँग एलन मस्कको ब्रेकअप !
काठमाडौं । पछिल्ला केही महिना क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा उतारचढाव आइरहेको छ । यसका पछाडि कतै न कतै टेस्लाका सीईओ एलन मस्क जोडिने गरेका छन् । उनको पछिल्लो ट्वीटका कारण विश्वकै लोकप्रिय
Published On :4June, 2021
जेफ बेजोस, एलन मस्क र बिल गेट्सलाई पछि पार्दै बर्नाड बने सबैभन्दा धनी व्यक्ति
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको ताज जेफ बेजोसबाट खोसिएको छ । अब फ्रान्सका ब्याबसायी बर्नार्ड अरनल्टको साथमा विश्वमा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति छ । फोर्ब्सको रियलटाइम बिलिनियर्स इन्डेक्स अनुसार मे
Published On : 1 June, 2021